वडा नम्बर छ (Woda Number 6) 2015
Topic: वडा नम्बर छ (Woda Number 6) 2015
Author Topic: वडा नम्बर छ (Woda Number 6) 2015 (Read 7681 times)
« on: July 18, 2015, 09:10:52 PM »
Music video of Woda No.6released, features Priyanka Karki and Deepak
वाइहात लभ् को भिडियो
« Last Edit: October 01, 2015, 10:37:24 AM by anand »
Re: वडा नम्बर छ (Woda Number 6)
« Reply #1 on: July 19, 2015, 08:44:43 AM »
gaazab hola jasto cha yo film ta..
Hernai paryo.... when is the release date?
« Reply #2 on: July 19, 2015, 10:32:59 PM »
Releases on Ashad 1
« Reply #3 on: September 18, 2015, 12:57:00 PM »
'प्रियंकाको बारेमा म गलत निस्किएँ': 'वडा नम्बर ६' निर्देशक घिमिरे
सिरियस काम सिरियस नभई गर्न सकिन्न
'म हाँस्दाहाँस्दै एक ठाँऊमा रोए पनि। त्यतिबेला यो फिल्म मैले आफैं बनाएको हुँ, निर्देशन गरेको हुँ भन्ने नै बिर्सेछु। हाँस्दाहाँस्दै फिल्मले रुवाउँछ।' शुक्रबार रिलिज हुन लागेको आफ्नो नवौं निर्देशकीय फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ को कुराकानीको अन्त्यमा उज्वल घिमिरेले भने।
यति भनिरहँदा उनी एकछिन त्यही क्षणमा पुगेजस्ता देखिए। विज्ञापन, फिल्म हुँदै साथीभाइको करबलमा निर्देशनमा आइपुगेका घिमिरेले 'वडा नम्बर ६' लाई मार्काको भइकन पनि नयाँ किसिमको र पहिले गरेभन्दा फरक भएको बताउँछन्। प्रोमो रिलिजपछि फिल्मले एक हदसम्म दर्शकलाई आकर्षित गरेको छ।
तीन वर्षअघि उनले रेखा स्टारर 'अन्दाज' निर्देशन गरेका थिए र त्यही बेला नेपाली रजतपटमा 'लुट' बाट निश्चल बस्नेत स्थापित भए। त्यसले नेपाली फिल्म नयाँ परिभाषाको खोजीमा रहेको देखायो। तीन वर्षपछि निर्देशनमा फर्केका उनले त्यही परिभाषालाई पछ्याईरहेको बताए।
'म लार्जर देन लाइफ किसिमकै फिल्म बनाउँने मान्छे हो। फिल्मले यथार्थ नै देखाउनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। त्यो कुनै न कुनै मानेमा ‘लार्जर देन लाइफ’ हुनैपर्छ। यो फिल्म हेरिरहँदा दर्शकले मलाई प्रत्यक्ष त देख्नुहुन्न तर फिल्मभरि यो उज्वल घिमिरेकै फिल्म हो भन्ने फिल गराउँछ। यति हुँदाहुँदै पनि मेरा पछिल्ला फिल्मभन्दा फरक छ यो फिल्म जून फिल्म हेर्दा अनुभव हुन्छ।'
उनको विचारमा 'वडा नम्बर ६' आजसम्म आफूले निर्देशन गरेको फिल्ममा एक नम्बर हो। 'हरेक फिल्ममा मान्छे 'ग्रो' हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। म पनि फिल्म पिच्छे 'ग्रो' भएको छु। यसमा पनि त्यो जारि छ र यसमा म अझ 'बेटर' फिल हुन्छु। त्यसैले यो फिल्म मेरा फिल्म मध्ये १ नम्बरमा पर्छ।'
फिल्ममा नेपालका अधिकाशं चर्चित हाँस्य कलाकारहरु अटाएका छन्। उनी सबैबाट सोचे जस्तै काम निकाल्न पाएकोमा खुसी छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनी फिल्मकी मूख्य अभिनेत्री प्रियंका कार्कीबाट विशेष प्रभावित छन्। 'उनी निर्देशककी एक्टर हुन्। सि इज डिरेक्टरस् एक्टर।' फिल्मपछि प्रियंकाको कामबाट खुसी भएका घिमिरे सुरुमा उनलाई फिल्ममा लिने कुरामा भने खुसी थिएनन्। निर्माता एवम् फिल्मका कलाकार दीपकराज गिरी प्रियंकालाई लिन चाहन्थे तर घिमिरेको रोजाइमा उनी थिइनन्। उनी अरु कसैलाई लिन चाहन्थे।
उनको असन्तुष्टिका बाबजुद प्रियंका नै फिल्ममा रहिन्। फिल्म गर्दै जाँदा प्रियंका आफूले खोजेजस्तो नभएको भन्ने धारणा बदलियो। आज उनको नजरमा फिल्मभरीमा सबैभन्दा 'बेस्ट' प्रियंका बनेकी छन्। उनी सुरूमा प्रियंकालाई लिएर आफूले बनाएको धारणा गलत रहेछ भन्ने स्वीकार गर्छन्। उनले प्रियंका राख्ने दीपकको अड्डीलाई धन्यवाद दिए।
'प्रियंका मेरो इच्छा थिइनन्। मैले दीपकलाई प्रियंका नै लिने हो भने पहिला म उनको दुई तीनवटा फिल्म हेर्छु अनि डिसाइड गर्छु भने। मैले प्रियंकाको काम हेरेको थिइन्। उनको काम हेरे ठीकै लाग्यो। काम गर्दै जाँदा म पहिला गलत रहेछु भन्ने लाग्यो। उनी 'डिरेक्टरस एक्टर' रहिछन् जून कलाकारमा हुनैपर्ने चिज हो। यहाँ कत्ति कलाकार निर्देशकले भनेको भन्दा पनि आफूले ठानेको जस्तो अभिनय गर्छन्। प्रियंका निर्देशकले खोजे जस्तो। हुन त फिल्म गरिरहँदा उनमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ तर निर्देशकले मागेको चिज गर्छिन्। यसको फाइदा भनेको निर्देशकले के चाहेको हो त्यो नै निर्देशकले पाँउछ'।
कुराकानीका क्रममा उनले प्रियंकाको लामो तारिफ गरे। 'उनी पर्फेक्ट छिन्। उनी फिल्मको पुरै डबिङ दुईतीन घन्टामा नै गर्न सक्छिन्।' प्रियंका पछि उनले दयाहाङ राईको तारिफ गरे।
'हि इज भेरी फाइन, एकदमै राम्रो एक्टर। फिल्डमा उसले गरेको अभिनय राम्रो हो कि होइन थाहा हुँदैन्। म आफै कन्फियूज भए तर अन द स्क्रिनमा ऊ एकदमै राम्रो देखिन्छ। कति एक्टर फिल्डमा राम्रो देखिन्छन् तर अन स्क्रिन नराम्रो। दयाहाङ् एकदमै उल्टो पाए।' उनका अनुसार फिल्ड दयाको अभिनय अन्डर एक्टिङ् लाग्छ, ओभर एक्टिङ हुँदैन तर स्क्रिनमा आइपुग्दा त्यही स्वभाविक हुन्छ।'
त्यस्तै उनले अरुको कलाकार पनि उनीहरुका सिरियलमा भन्दा फरक गराएको दाबी गरेका छन्। उज्वल घिमिरेको फिल्म अनुशासन महत्वपूर्ण कडी हो। धेरैले उनलाई कडा निर्देशक भन्छन्।
'हो म फिल्म बनाउँदा सेटमा कडा हुन्छु। अहिले करोडौं र अरबौको फिल्मसँग प्रतिष्पर्दा गर्नुपर्छ। हामीले सानो बजेटमा राम्रो फिल्म दिनुपर्ने भएकाले मेकिङ्मा अनुशासन हुनु जरूरी छ। अनुशासनमा रहेर गरिएको काम पक्कै नराम्रो हुँदैन। सिन सिरियस छ तर कलाकार बाहेक अरु आफ्ने तालमा रहन्छन्। त्यसले कलाकारले राम्रो काम गर्न सक्दैन्। अनुशासनमा बसेपछि सबैको ध्यान हामी के गर्दैछै भन्नेमा केन्द्रीत हुँदा राम्रो काम आउँछ।'
उनी मानिसहरु फिल्म जस्तो गम्भीर बिषयमा हल्काफुल्का हुने गरेको देख्छन्। जसका कारण फिल्मको रिजल्ट पनि हल्काफुल्का नै आइरहेको छ। जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो भइरहेको छैन्। त्यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको ठम्याइ छ। 'सिरियस काम सिरियस नभई गर्न सकिन्नँ' उनले भने। उनी आफ्नो काममा कति सिरियस छन् भन्ने कुरा रेखा थापाको भनाइबाट अझ स्पष्ट हुन्छ। 'अन्दाज' फिल्मबाट सर्वोत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड उचालेपछि रेखाले भनिन्, '२०-२५ टेक पछि पनि किन ओके भन्नुभएन भन्ने कुराको जवाफ हो यो अवार्ड।' यसबाट नै उनको फिल्मप्रतिको गाम्भीर्यता बुझ्न सकिन्छ।
« Reply #4 on: September 18, 2015, 12:57:36 PM »
movie released --> http://xnepali.net/movies/friday-release-woda-number-chha-only-in-kathmandu/
positive response ... will post the review soon.
« Reply #5 on: September 19, 2015, 02:40:31 PM »
रिभ्यू मात्र, सकिन्छ भने फिल्म नै अपलोड गरी लिंक दिऊ न हउ ।।
« Reply #6 on: September 21, 2015, 01:13:51 PM »
Quote from: hellouncle on September 19, 2015, 02:40:31 PM
फिल्म नै त के पाइएला र ..
‘फिल्म चल्नैपर्छ भन्ने छैन तर हेर्दा लाज लाग्ने चाही हुनुहुन्न’
- कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं
आश्विन २, २०७२- झन्डै दुई दशकदेखि निर्देशकका रुपमा सक्रिय उज्ज्वल घिमिरेले आठवटा फिल्म बनाएका छन्। उनको नवौं फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ। सुशील पौडेलसँगको कुराकानी:
तपाईंको फिल्मको प्रचार कमेडी शैलीमा भइरहेको छ तर तपाईं देखिनुहुन्न नि किन?
‘वडा नम्बर ६’ कमेडी हुँदाहुँदै पनि यसमा गम्भीरता छ। प्रचार कमेडी शैलीमा भइरहेको छ। तर म फिल्म प्रचारका त्यस्ता कार्यक्रममा गइरहेको छैन। किनभने म कमेडियन पनि हैन र मेरो काम पनि छैन।
फिल्ममा निर्देशकको भूमिका कहाँ पुगेर सकिन्छ? प्रचारमा निर्देशक हुनु पर्दैन?
फिल्म ल्याबबाट निस्किसकेपछि निर्माताबाट अलग हुन त सक्ला तर दर्शकसँग निर्देशक आजीवन जोडिरहन्छ। कस्तो फिल्म हो? कुन बेसमा बनाएको हो, कुन जानराको कसरी बनाएको हो भनेर दर्शकलाई थाहा दिनु निर्देशकको कर्तव्य रहन्छ।
यो फिल्म पहिलेका भन्दा कसरी फरक छ?
म व्यावसायिक फिल्म बनाउने मान्छे हुँ। अलिकति बलिउड ‘स्कुल अफ थट’ बाट प्रभावित छु। म प्रकाश थापाको चेला हँु। ममा विद्वता नभएर यसो गरेको पनि हैन। मेरो फिल्मको सिद्धान्त ‘लार्जर देन लाइफ’ हो। वडा नम्बर छ त्योभन्दा अलि फरक छ।
ठ्याक्कै फरकचाहिं के हो त?
स्क्रिप्टको पेस स्लो थियो। बनाउँदै जाँदा यसलाई बेग्लै ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भन्ने भयो। यसमा राजेश हमाल, आर्यन सिग्देलजस्तो स्टारकास्ट छैन। न चार, पाँचवटा गीत नै छ। र, रोमान्स पनि त्यस्तो धेरै छैन। त्यसैले यो अलि बेग्लै बन्यो। मैले नजानेर यस्तो बनाएको होइन। म नयाँ धारको आर्ट
फिल्म बनाउनुपर्‍यो भने पनि सक्छु। किनभने मसँग अध्ययन छ, अनि मजस्तो फिल्म हेर्ने र पुस्तक पढ्ने निर्देशक सायदै कोही होला।
यो फिल्म तीन वर्षको अन्तरमा बनाउनुभयो, निर्माताले नपत्याएर हो कि अरू कुनै कारण थियो?
म छानेर मात्रै काम गर्छु। यो बीचमा मकहाँ धेरै स्क्रिप्ट आएका थिए। हरिवंश आचार्य दाइको स्क्रिप्टमा पनि काम गरिरहेका छौं। केही राम्रो हुने देखेपछि स्क्रिप्टलाई अझ राम्रो बनाउन लागेका छौं। मैले चाहेर नै थोरै फिल्म गरेको हुँ।
प्राय: स्क्रिप्टमा के समस्या पाउनुभयो?
प्राय: निर्माताहरू एउटा रोल आर्यन व जीवन लुइँटेललाई र अर्को आफैंले भनेर भाग लगाएर आउँछन्। टाइटल ‘सुपरम्यान’ टाइपका हुन्छन्, हिरो यस्तरी उड्दै आउँछ भनेर निर्माताले भन्छन्। म कसैले लेखिसकेको स्क्रिप्टमा फिल्म बनाउन चाहन्नँ। लेखनमा पनि सुरुदेखि नै संलग्न हुन खोज्छु। प्राय: नयाँ निर्माताले म कहाँ आउने हिम्मत गर्दैनन्, पुराना नै आउँछन्। निर्देशकको काम लेखकदेखि कलरिस्टसम्मलाई डाइरेक्सन गर्ने हो।
धेरै कलाकार लिएर फिल्म बनाउन कत्तिको गाह्रो भयो?
यो फिल्मका कलाकार स्टार होइनन्, कलाकार हुन्। धूलोमा लड भन्यो भने लडिहाल्ने। हाम फाल भन्यो भने साँच्चिकै हाम फाल्दिने। तर टेलिफिल्ममा खेल्ने भएकाले उनीहरूको एक्टिङ पनि अलि लाउड हुने रहेछ। त्यसमा धेरै कुरा दबाउन पर्‍यो। उनीहरू क्यारेक्टरभन्दा पनि बढी आफ्नै परिचयमा देखिन खोज्ने। मेरो काम भनेको तपाईं माग्ने बूढा वा राजाराम (पौडेल) हैन फलानो हो भनेर चरित्र सम्झाउने काम हुन्थ्यो। तर सबैजना एकदमै कोअपरेटिभ। स्टारलाई लिँदा कुर्नुपर्ने, अनेक झमेला हुन्छ। यसमा सबै कलाकारले सय प्रतिशत काम गरे त्यो साह्रै राम्रो पक्ष। कलाकारहरू राम्रो फिल्म बनाउँ भन्ने भावनाका। उनीहरू सबैजना प्रोड्युसर रहेछन्, मलाई पहिले थाहा थिएन।
फिल्म रिलिजको बेला निर्माता र निर्देशक अलग देखिनुको कारण के हो?
खासै ठूलो होइन, प्रचारको तरिकामा कुरा नमिलेको हो। मैले फिल्मको प्रचार गर्दा अलि इन्टेलेक्चुअलिटी आओस् भनेको हुँ। प्रचारका लागि आर्टिस्ट नै गाउँगाउँ कुद्नु जरुरी पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो मान्यता भनेको स्टारलाई हेर्न दर्शक लालायित हुन् भन्ने हो। यो उहाँहरूकै फिल्म भएकाले मैले विरोध पनि गरेको छैन। मैलेचाहिँ प्रचारको यो शैलीमा म सहज महसुस गर्न सक्दिनँ।
सशस्त्र द्वन्द्व कथाको पृष्ठभूमिले व्यवसायमा केही फरक पार्छ?
हाम्रोमा केही अन्धविश्वास छन्। कोही विदेशमा सुटिङ गरेको फिल्म चल्दैन भन्छन्, कोही जोमसोममा गीत सुटिङ गर्‍यो भने त्यो फिल्म साफ हुन्छ, सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा फिल्म बनायो भने चल्दैन भन्छन्। हाम्रो फिल्ममा सशस्त्र द्वन्द्व निकै धेरै छैन। फेरि यस्ता अन्धविश्वासलाई त तोड्दै जाने हो।
अहिले फिल्महरू किन चलिरहेका छैनन्?
हामी व्यावसायिक हुन सकेका छैनौं। सबैलाई एकपटक निर्माता वा निर्देशक हुनुपरेको छ, आफूले राम्रो गर्न सक्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन। पाँच लाख रुपैयाँ निकाल्यो भने त्यो मान्छे चाहेको बन्न सक्छ। कलाकार होइन, निर्देशकका नाममा फिल्म चल्ने हुनुपर्छ। दर्शकले निर्देशकमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। केही फिल्म चलेका पनि छन्। निर्देशकका सबै फिल्म चल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन तर हेर्दा लाज लाग्नेचाहिँ हुनुहुन्न ।
प्रकाशित: आश्विन २, २०७२
« Reply #7 on: September 23, 2015, 03:31:18 AM »
review in nepal
woda number6review 2.jpg (57.33 kB, 600x1005 - viewed 383 times.)
woda number 61.jpg (60.64 kB, 600x986 - viewed 381 times.)
« Reply #8 on: September 23, 2015, 02:46:41 PM »
यस्तो छ ‘वडा नम्बर ६’ चल्नुको भित्री रहस्य
२०७२ असोज ५ गते
हाँस्य विधामा प्रभाव जमाएका कलाकारहरुले अभिनय गरेको चलचित्र ‘वडा नम्बर छ’ चलेपछि फिल्म कसरि चल्यो भन्नेका विषयमा टिप्पणी सुरु भएको छ, नेपाली फिल्मवृत्तमा ।
यो फिल्म यसरी चल्नुको पहिलो जस लगातार परेको विदाई दिए धेरैले । फिल्म चल्नुको दोस्रो कारण दीपकाराज गिरी र दिपाश्री निरौलाको अभिनयलाई भने । फिल्म चलेको आज चार दिन बित्यो तर, पनि विषयबस्तु कस्तो छ भन्नेमा बहस सुरु भएको छैन ।
काठमाडौका तीन दर्जन हाराहारीका हलमा रिलिज भएको उक्त चलचित्रले चार दिनमा करोड बढी कलेक्सन गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा यो ब्यापार निकै राम्रो हो । बितरक सुनिल मानन्धर ‘वडा नम्बर छ’ को ब्यापारले धेरै निर्मातालाई आशावादी बनाएको बताउँछन् ।
नेपाली फिल्म उद्योगमा कुनै एउटा राम्रो फिल्म चल्ने बित्तिकै एकथरी मान्छेहरु हल्ला गर्छन । ‘ल अब सिनेमाको माहौल सुरु भयो ।’ एउटा फिल्म राम्रो चल्दैन माहोल सुरु भयो भन्न नमिल्ने धारणा राख्छ्न् निर्देशक । किनकी ‘वडा नम्बर छ’ हेेरेका दर्शकले अर्को नेपाली चलचित्र हेर्छन् नै भन्ने छैन ।
यसमा चार जना हाँस्य कलाकार बाहेक प्रियंका कार्की र दयाहाङ राईले पनि अभिनय गरेका छन् । यी कुनै पनि कलाकार यस्ता छैनन् । जसको नाम सुनेकै भरमा कुनै फिल्मले लगानी उठाउने क्षमता राख्छ । दयाहाङ र पि्रय्रंकाले अभिनय गरेका तर, बजारमा नचलेका असफल सिनेमा धेरै छन् । दिपकराज, दीपाश्री, धुर्मुस वा माग्ने बुढा । कसैको पनि त्यस्तो क्रेज छैन जसले लगानीको ग्यारेन्टी गर्न सकुन् । दीपक वा दीपा भएकै कारण फिल्म चल्थ्यो भने ‘सुन्दर मेरो नाम’ पनि चल्थ्यो होला ।
‘वडा नम्बर छ’ चल्नुको कारण साँच्चै खोज्ने हो भने यसको श्रेय दुई ब्यक्तिलाई जान्छ । दीपकराज गिरी र उज्वल घिमिरे । प्रारम्भमा विषय छान्ने काम दीपकले गरेका थिए भने यसलाई परिस्कृत गर्ने काम उज्जवलले गरेका थिए ।
यसको स्क्रिप्ट लेखनमा मात्रै तीन महिना लागेको थियो । स्क्रिप्टको अन्तिम फाईनल गर्दा निर्देश घिमिरे र गीरिले हात्तीवन रिसोर्टमा १५ दिन बिताएका थिए ।
फर्मुला भन्दा पर
यस अघि ‘छ एकान छ’ बनाएका दीपकराजको समुहले उक्त चलचित्रवाट पनि राम्रो सफलता पाएको थियो । चलचित्रलाई परम्परागत सुत्रवाट पर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गीरिले अघिल्लो फिल्मलाई पनि नेपाली फिल्ममा चल्दै आएको परम्परागत शुत्रवाट मुक्त गराएका थिए ।